Ngaba iApple iya kuyithathela ingqalelo i-Echo Show yaseAmazon? | Ndisuka mac
Ngaba iApple iya kuyithathela ingqalelo i-Echo Show yaseAmazon entsha?
IAmazon ihambise i-tab kwaye ivelise isithethi sayo esitsha esi-smart abathi bayibiza ngokuba yi-Echo Show. Sisithethi apho bongeze khona isikrini sokuchukumisa esi-7-intshi esinokuhamba ngayo kwimixholo kwaye unendlela yokunxibelelana nabanye abantu ngendlela elula kakhulu.
Kuthunyelwe esi sithethi, ukuvalwa kwe-Apple okanye iGoogle ngokuqinisekileyo ibisemva kwemveliso kweli candelo ixesha elithile. I-Apple inenkqubo yayo yokusasaza umculo, iApple Music, inkonzo ekhula njengogwebu kwaye kancinci kancinci Iya ibaluleke ngakumbi ngaphakathi kwendalo yenkampani yeapile yokuluma.
Inyaniso yokuba iAmazon isibonisile esi sithethi silumkileyo ibeka iApple kwimeko engazinzanga kakhulu kwaye kukuba abo baseCupertino baqinisekile ukuba sele beyivavanya ngokucokisekileyo ukubona ukuba abanako kwiilebhu zabo kubhetele okanye kungaphuculwa. Njengoko sele uyazi, kwiminyaka emininzi eyadlulayo, U-Apple ubenobuganga bokubonisa isithethi ukuba sisetyenziswe kunye ne-iPod Classic, abayibiza ngokuba yi-iPod HiFi.
Kule meko, isithethi esikrelekrele esifana nale sinikezwe yiAmazon onokuthi wenze kuyo iifowuni zevidiyo, ubukele umxholo we-Intanethi, ubukele iividiyo okanye ufunde amazwi eengoma ezenza ukuba ibe liziko lemithambo ekhayeni lethu Kwaye kunokwenzeka ukulawula iikhamera zokhuseleko.
Masibone ukuba ithatha ixesha elingakanani iApple beka ukubheja kwakho kwimarike, kuba siqinisekile ukuba oku kuya kwenzeka kungekudala kunokuba kwenziwe kamva. Ixabiso lesithethi IAmazon yi- $ 320 nangona kwesi sixhobo ngoku ungayithenga phantse isaphulelo sedola ezili-100.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ngaba iApple iya kuyithathela ingqalelo i-Echo Show yaseAmazon entsha?
Ngokuqinisekileyo ... i-iPad ayikenzi konke oku ... nangaphezulu?
kuba andisiboni isidingo sokuthatha enye imveliso ... yi-iPad okanye i-iPhone enedokodo njengesithethi.
Kodwa ke kuya kufuneka ubenayo nokuba yeyiphi ye-exho egumbini lakho, okanye uyithathe ukusuka kwenye indawo uye kwenye, ndiyayibona iyinkathazo
Yongeza amazibuko e-USB angaphambili kunye nephedi yamaqhosha kwi-iMac yakho
Izicelo zeAntivirus zeMac ziyakhula, kodwa akukho mfuneko yazo